Bulshada Baran oo Soo dhaweeyay Howlgalo ay Fuliyeen Ciidanka Daraawishta – SBC
Bulshada Baran oo Soo dhaweeyay Howlgalo ay Fuliyeen Ciidanka Daraawishta
Qeybaha kala duwan ee Bulshada gobolka Sanaag ayaa siweyn u soo dhaweeyay howlgaladii ciidamada Daraawiishta gobolka Sanaag ay sameeyeen shalay gelinkii dambe, Xalay iyo saakayba, kuwaas oo ay banaanka uga saareen Baran Saraakiil ka mid ah Maamulka Soomaaliland oo shalay qaab gaadmo ah ku yimid Baran.
Maanta gelinkii hore ayaa Magaalada Baran waxaa laga dareemayay dhaq dhaqaaqyada ciidamada Daraawiishtu ay ka sameynayaan gudaha degmadaas iyagoona rasaas badan la maqlayay, taas oo ay ciidanku ku ridayeen guri ku yaala duleedka galbeed ee magaalada, kaas oo ay ku jireen rag lagu sheegay in ay yihiin u adeegayaasha maamulka Labaxay Soomaaliland .
Gaashaanle Sare C/laahi Cumar Cashuur taliyaha Aaga ciidanka Daraawiishta gobolkaas ayaa sheegay in howlgaladan ay ku dhaqaaqayaan ay yihiin kuwo ay gaar kaga hayaan dhaq dhaqaaqa maamulka Siilaanyo uu ka wado gobolka isagoona intaasi ku daray in ay banaanka uga saareen magaalada Balad nin taliye ahaa oo maamulka Soomaaliland ku magacaaban, kaas oo isagu shalay qaab dhuumaaleysi ah ku yimid magaalada.
Sidoo kale waxaa isna maanta ku sugnaa Degmada Baran gudoomiyaha Gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur Dabeyl oo isagu halkaasi kulamo kula yeeshay qaar ka mid ah masuuliyiinta baran iyo waxgaradka isagoona goob fagare ah kula hadlay shacabka, una sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin difaaca dalka iyo ka caabinta maamulka soomaalidiidka ah ee la baxay Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay.
Sikastaba ha ahaatee shacabka magaalada Baran iyo guud ahaan gobolka Sanaag ayaa muujinaya soodhaweyn ay soo dhaweynayaan howlgalada maamulka gobolka ee Puntland uu ka sameeyay gobolka.
Cabwali olol says:
kkkkkkkkkkk rasaastii ay s/landtu dabaal deg ahaan u rideysay maanta ayaa waxaad soo qorteen puntland baa howlgal sameysay. kkkkkkkkkk rageedii
waxay ila tahay in uu jilcsan yahay mamulka gobolka sanag bari ee puntland,sababto ah ninmanka Somaliland tabacsan side kuso gali karan dhulka sanag bari ee puntland?hadii aaysan jirin habac saan aay kahelan dadka dhulka degan,arimahas waxay umuqdan kuwo su’ali katagan tahay?.